Kpido: ọsọ peeji » Martech Zone
Kpido: ọsọ peeji
Ịgụ Oge: 6 nkeji Imirikiti saịtị na-efunahụ ihe dị ka ọkara nke ndị ọbịa n'ihi ọsọ ọsọ ibe ha. N'ezie, ọnụ ọgụgụ nkwụghachi elu nke ibe desktọọpụ desktọọpụ bụ 42%, ọnụọgụ nkwụghachi azụ nke ibe weebụ bụ 58%, na nkezi post-pịa ọdịda peeji ibiaghachi ọnụ sitere na 60 ruo 90%. Naghi onu ogugu site n’uzo obula, tumadi n’igoro ojiji ekwenti n’aga n’ihu na etolite ma ya esi ike karie ubochi iji dọta ma debe ndi ahia. Dị ka Google, ndị
Ihe Mere I Kwesịrị Iji Na-eji Foto mkpakọ
Tuesday, June 19, 2018 Satọde, 23 Juun 2018 Douglas Karr
Ịgụ Oge: 2 nkeji Mgbe ndị na-ese ihe nkiri na ndị na-ese foto sere onyinyo ikpeazụ ha, a naghị arụ ọrụ nke ọma iji belata nha faịlụ. M na-agwa Caleb Lane okwu, nchekwa WordPress na njikarịcha ndụmọdụ, wee chọpụta na onyonyo onyonyo dị na saịtị anyị buru ibu (na mgbakwunye na ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ ọ ga - enyere anyị aka ịkwalite). Erik Deckers maka mmeghe! Inwe nnukwu onyonyo apụtaghị na ị ga-enwe nha onyonyo buru ibu.
Ịgụ Oge: 3 nkeji Ebe nrụọrụ weebụ na-adịghị nwayọ na-emetụta ọnụego ibiaghachi, ọnụego ntụgharị, yana ọbụlagodi njin ọchụchọ gị. Nke ahụ kwuru, ọ tụrụ m n'anya na ọnụ ọgụgụ saịtị ndị ka na-adịghị nwayọ nwayọ. Adam gosipụtara m saịtị nke taa kwadoro na GoDaddy nke na-ewere ihe karịrị 10 sekọnd iji kwado. Onye ogbenye ahụ na-eche na ha na-echekwa ego ole na ole na nnabata… kama ha na-efufu ọtụtụ ego n'ihi na ndị ahịa na-agba mbọ na ha. Anyị emeela ka ndị na-agụ akwụkwọ anyị dị elu
Ịgụ Oge: 3 nkeji Anyị edeela obere ihe gbasara ihe ndị na - emetụta ikike weebụsaịtị gị ịbu ngwa ngwa ma kesaa otu nwayọ ọsọ na-emerụ azụmahịa gị. Ọnụ ọgụgụ ndị ahịa anyị na-ajụ na-eju m anya n'eziokwu nke na-etinye oge na ume dị ukwuu na azụmaahịa ọdịnaya na atụmatụ nkwalite - niile ka ị na-ebunye ha na ndị ọbịa na-enweghị atụ yana saịtị na-ebughi oke ibu ngwa ngwa. Anyị na-anọgide na-enyocha ọsọ nke saịtị anyị na
Ịgụ Oge: 3 nkeji Anyị na-arụ ọrụ na vitamin na ụlọ ahịa na-agbakwunye na ntanetị iji nyere aka mee ka ọhụhụ ọchụchọ ha na ọnụego mgbanwe. Nkwekorita a ewela obere oge na akụrụngwa, mana nsonaazụ ya amalitela igosi. Ejiri saịtị ahụ chọọgharị ma degharịa ya site na ala. Ọ bụ ezie na ọ bụ saịtị na-arụ ọrụ nke ọma na mbụ, ọ nweghị ọtụtụ ihe dị mkpa iji wulite ntụkwasị obi ma mee ka ntụgharị ahụ dị nro
1 2 ... 4 Ọzọ →